तिमी चाँडै निको हुन्छौं निमा | Kendrabindu Nepal Online News
१८ माघ २०७५, शुक्रबार १४:४७
२०७५ माघ १७ गते एक अपरिचित व्यक्तिको फ्रेण्ड रिक्वेष्ट आयो । प्रोफाईलभित्र गएर हेरें तर चिनिन् । प्रोफाईल हेर्दा एउटा कुराले मेरो मन छोयो । त्यो थियो, ‘ब्लड क्यान्सर पीडित ६ वर्षीय बालकको जीवन रक्षाको माग ।’ उक्त लेखिएको कुरा देखेपछि तिनै बहिनीको रिक्वेष्ट एक्सेप्ट गरे । मैले फ्रेण्ड रिक्वेष्ट एक्सेप्ट गर्नुभन्दा पहिला उनले म्यासेस नै पठाएकी रहेछन् ।
जुन मैले साथी नबनाईकन देख्न सकिन । जब उनी मेरो साथी बनिन् त्यसपछि म्यासेज पढ्ने मौका पाए । त्यो म्यासेजमा लेखिएको थियो, ‘ब्लड क्यान्सर पीडित ६ वर्षीय बालक निमा लामा आर्थिक अभावले उपचार गराउन नसक्ने अवस्थामा छन् । उनको उपचारका लागि तपाईले केही सहयोग गरि दिनुपर्‍यो ।’ मैले उक्त कुरालाई आफ्नो मनमा राखेर उनीसँग थप कुराकानी गरे ।
आज (माघ १८) गते बालकको परिवारलाई भेटें । त्यो बीचमा म निमाको परिवारसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरामा सोचिरहेको थिए । म र हाम्रो एक जना क्यामेराम्यान सन्दीप आचार्यलाई लिएर उनीहरु बसिरहेको त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्न्तको घरमा जाने कार्यक्रम तय गरियो । हामीहरु आउने कुरा बहिनी निर्मला लामाले निमाको आमा सेतिमाया लामा र आफन्तलाई जानकारी गराईसकेकी रहेछन् । आज बिहान ११ बजेतिर उउनीहरु बसिरहेको घरमा पुग्यौं ।
घरमा पुगेपछि निर्मलाले ब्लड क्यान्सर पीडित बालक निमालाई देखाईन् । उनी त मज्जैले खेलिरहेका थिए । मलाई अचम्म लागेर निर्मलालाई सोधीहाले, ‘उनी मजाले खेलिरहेका छन्’ प्रश्न सकिन नपाउँदैं निर्मलाले भनिन्, ‘अहिले राम्रो भएपनि एक्कासी पेट दुख्यो भन्छ । एकाएक बेहोस भएर लडिहाल्छ । तुरन्तै अस्पताल लैजानुपर्छ सर !’ यति सुनिसकेपछि मेरो मनमा उब्जिएका सबै प्रश्नको उत्तर पाईयो ।
एकैछिनको भलाकुसारीपछि हामी अन्तरवार्ताको लागि तयार गर्न थाल्यौं । निमा र उनका आमा सेतिमायालाई सँगै राखेर मैले अन्तार्वाता लिन थाले । निमाको बारेमा केही जानकारी दिँदैं सेतिमायालाई मैले प्रश्न राखे, ‘कसरी र कहिलेबाट निमा विरामी पर्‍यो ?’
सेतिमायाले सहजै उत्तर दिन थालिन् । प्रश्नको उत्तर पाईसकेपछि मैले दोस्रो प्रश्न राखे । त्यसको उत्तर पाउने क्रममा सेतिमाया बोल्नै सकिनन् । उनी बेस्सरी रुन थालिन् । मैले पनि आफ्नो मनलाई थाम्न सकिन् । मेरो आखाबाट आँशु नआए पनि मन भने रोईसकेको थियो ।
त्यक्तिैकैमा मैले मेरो जन्मदिने आमालाई सम्झिए, म भन्दा माईलो दाई मोटरसाईकल दुर्घटनामा परेर बितेपछि मम्मीलाई मैले सम्हाल्न सकेको थिएन् । उहाँ बेला बेला बेहोस हुने, अनि सधै रोईरहने गर्नुहुन्थ्यो । अहिले पनि त्यो घटनाबारे केही कुरा आउँदा उहाँलाई सम्हाल्नै गाह्रो पर्छ । उहाँले हामी भाईहरुमाथि देखाउने मायाको बारेमा शब्दमा वर्णन गर्न सकिदैंन् । त्यो कसैले पनि सक्दैन् ।
हो सेतिमायाको रुवाईले पनि मलाई त्यस्तै स्तब्द बनायो । मैले त्यसपछि प्रश्न नै गर्न सकेन् । एकैछिन पानी पिएर फेरि अन्तवार्ता सुरु गरे । तर उनी एकछिन पनि बोल्न सकिनन् । रोईमात्र रहिन् । मैले अनेकन उपाय लगाएर सम्झाउन खोजे तर म असफल भए । सेतिमायाको रुवाईले अझै पनि मेरो मनमा आगो बलिरहेको छ । मेरो मन बेला बेला कापीरहेको छ । मनलाई शान्त पार्न सकिरहेको छैन् ।
यस्तो अवस्थामा कुन आमाको मन नरोला र ? आफ्नै अगाडि आफ्नो छोरा त्यो पनि नावालक भर्खर ६ वर्षमा प्रवेश गरेको छोरा जटिल प्रकारको रोगबाट पीडित हुँदा सबै आमाको आँखाबाट आशु नै बग्छ । अझै गहिरिएर भन्नुपर्दा आखाबाट आशु होईन् रगत नै बग्छ । छोराको उपचारको लागि २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । एउटा गरिव परिवारले २५–३० हजार जुटाउन त गाह्रो पर्छ कहाँको २५–३० लाख नि ! ५ वर्षको हुँदा उनमा ब्लड क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो ।
त्यसपछि उपचार गर्दागर्दै एक वर्षको अवधीमा झण्डै १५ लाख जति खर्च भईसकेको छ । सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका ३ मयौलीका सेतिमायाको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ । श्रीमान टलक बहादुर लामा वैदेशिक रोजगारीको लागि कतारमा छन् । उनी पनि केही दिनमा नेपाल फर्किदैंछन् । विदेशमा कमाएको पैसाले घर खर्च चलाउन र बच्चाहरुलाई बढाउन ठिक्क भईरहेको थियो । त्यो पनि छोराको उपचारमा सकिएपछि झन ऋण नै लागेको छ ।
एक वर्षसम्म उनले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । अन्तिममा सिभिल अस्पतालमा उपचार गराउँने क्रममा डिस्चार्ज गरिएको थियो । उपचारका क्रममा हाई डोज र महंगो औषधी दिनुपर्ने भन्दै सिभिल हस्पिटलले कम्तिमा पनि २० लाख रुपैयाँ जम्मा नगरी उपचार गराउँन नआउँन भनेको थियो । त्यसपछि सेतिमायाको मन मुटुले नै काम गर्न छोडेको छ ।
निमाको उपचारका लागि यतिबेला देश विदेशबाट सहयोग भईरहेको छ । अहिलेसम्म करिब ३ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको अभियानता निर्मला लामाले जानकारी दिईन् । उनी निमाको उपचारको लागि आर्थिक सहयोग संकलनमा अहोरात्र खटिएकी छन् । यदि तपाई हामीले पनि सानो भएपनि आर्थिक सहयोग गरिदिएमा निमाको जीवन बचाउँन सकिन्थ्यो ।
Blood cancer, Nima Lama, उपचार, डाक्टर, निमा लामा, बालक, ब्लड क्यान्सर, सिन्धुली, सिभिल हस्पिटल
Prevजगदम्बाको जगशक्ति गोल्ड टिमएटी बजारमा
जब नेविसंघले बेलुनमा कालो झण्डा झुण्ड्याएर सिंहदरबारमा उडायोNext